Wararka - Maxaa goomaha daboolan ee waalka u noqon doonaa daadashada saliida?
Marar badan injineer daadinta waa lama huraan, Gaar ahaan haddii aad isticmaasho saliid xun, Waxaa jira waxyaabo badan oo nijaas ah oo ku jira saliida, Kaliya kuma kordhiso duugista iyo jeexitaanka mishiinka,
Waxay kaloo sababi kartaa saliidda mishiinka oo daata.
Aynu ka wada hadalno waxyaabaha qaarkood ee daloola ee ku yaal daboolka qolka waalka.
Maxaa sababa in qolka waalka uu daadiyo? Sidee loola macaamilaa?
Waa maxay goomaatada daboosha matoorka?
Mashiinka mashiinka daboolka mashiinka - oo si fudud loogu yaqaanno daboolka qolka waalka waa xubin ka mid ah shaashadda qaybta sare ee mishiinka. Waxaa lagu shaabadeeyey saliida mashiinka ee u dhiganta digsiga saliida si saliida aysan udaadan marka mashiinku shaqeynayo. Madaxa silsiladda oo u dhigma jirka silsiladda, waalka u dhigma ayaa lagu rakibay madaxa silsiladda, jirka silsiladuna waa loo sameeyay qol isku ururin ah oo la xiray, xaalado gaar ah, oo u oggolaanaya isku darka la guban karo inuu ku gubto dhexdiisa. Daboolka qolka waalka sare, daboolka silsiladda hoose, jirka silsiladda hoose, iyo saliida salka hoose.
Waa maxay sababta gaaska daboolan uu u noqon doonaa dheecaan saliid?
1- Gabowga gaaska hawo-mareenka oo ka da'aya daadashada saliida.
Marka hore, goomaha qolka waalka ayaa la isticmaali jiray waqti dheer, taasoo keenta gabow iyo luminta awood u lahaanshaha inuu xirto dheecaanka saliida.Seleeti goglan oo loogu talagalay walxaha caagga ah, sababtoo ah nolosha adeegga gawaarida waa mid aad u dheer, walxaha caaggu waa sii gaboobi doonaan, wey adkaan doonaan, natiijada daadashada saliida.
Maaddaama qolka waalka uu ku yaal qaybta sare ee mishiinka, saliidda ayaa hoos u qulquli doonta madaxa silsiladda ka dib markii uu daadiyo qolka waalka, maxaa yeelay jirka mashiinka ayaa shaqeynaya
Heerkulka sare, saliida ku dheggan dusha sare ee jirka ayaa si tartiib ah uumi doonta, soona saareysa qiiqa cirka isku shareeraya.
Xaaladdan oo kale, kaliya fur daboolka qolka waalka oo beddel daboolka gasket.valve gasketka meelaynta ma badna
2.-Waalka hawo qabatinka qasabka ah oo qasab ah ayaa xiran
PCV waalka nidaamka hawo crankcase xiran yahay, taas oo keenta cadaadis xad-dhaaf ah gudaha mashiinka iyo ugu danbeyn keenaysaa saliid baxsiga hoos cadaadis.If qaladkan aan la ogaan, waxay keeni doontaa dhibaato badan ka dib, sida baxsiga saliid crankshaft iyo wixii la mid ah.However, waa wax aad u fudud in la ogaado in waalka PCV-ku uu si caadi ah u shaqeynayo: marka lagu jiro duruufo bilaa camal ah, xaaladda shaqada ee waalka PCV isla markiiba ayaa lagu go'aamin karaa iyada oo fartaada lagu tijaabinayo faaruqinta godka godka.
Habka kormeerka ee kumbuyuutarka PCV ee qalabka hawo qasabka:
Ka dhig mashiinka mid aan shaqeyneyn, ka saar tuubada PCV-ga tuubada daboolka silsiladda, hubi in qalabka korantada ee PCV uu xiran yahay iyo in kale.Haddii aad gacantaada saarto qalabka wadnaha PCV, farahaaga ayaa dareemi doona faaruqin xoog leh.
Qaab kale oo kormeer ah ayaa ah in lagaa saaro tuubada godka ka soo baxda ee miiraha hawada ka dib marka la rakibo waalka PCV, oo si tartiib ah loogu daboolo qaboojiyaha warqad yar oo warqad ah. Marka cadaadiska ku jira crankcase-ka uu hoos u dhaco (oo ku saabsan IMIn), waa inuu cadaadaa in warqada cadka loo jiiday dhanka furitaanka tuubada. Intaa waxaa dheer, ka dib markaad joojiso mashiinka, ka saar qalabka PCV-ga oo ku hubi gacanta. Haddii uu jiro dhawaaq "guji", waalka PCV waa la rogrogmi karaa waana la heli karaa.
3- Cilad-darrada qaybaha kale ee mishiinka waxay horseedaa daadashada saliidda.
Gabowga giraanta piston-ka ee mishiinka wuxuu horseedaa daboolid dabacsan. Marka mashiinku xawaare sare ku socdo, ifafaalaha qulqulka dhululubo ayaa dhacda, taasoo u horseedda cadaadiska gaaska ee qiiqa badan, iyo xaaladaha qatarta ah, waxay si toos ah u horseedaa waxyeelada gaaska dabaysha daboolaya iyo saliida ka daadanaysa.
Intaas waxaa sii dheer, tayada saliida oo liidata awgeed, kaarboonka halista ah ee isku dhejinta bistoolada, rakibaadda goomaha caaggu caadi maahan, taasoo ka dhalaneysa xoog aan sinnayn, iwm., Dhibaatooyinkaas oo dhami waxay horseedi doonaan waxyeello ka timaadda gaaska daboolan iyo dheecaanka saliidda.
Burburka daadashada goomaha daboolka caagga
Fiiro gaar ah u yeelo sababaha daboolaya dheecaanka saliidda gaaska .qasaaraha mashiinka.
Waxaa jira khatar badbaado oo suuragal ah sida dabka ka dhasha saliidda ku daadata goomaha waalka.
Sababtoo ah daadashada saliida ee daboolka qolka waalka, saliida soo daadata waxay hoos udhigi doontaa jirka matoorka. Sababtoo ah heerkulka sare ee jirka mashiinka marka mashiinku shaqeynayo, saliida ku dhagan dusha sare ee jirka mashiinka ayaa tartiib tartiib u soo bixi doona oo soo saari doona ur xun. Xaaladaha daran, saliidu waxay geli doontaa gaariga iyadoo la socota nidaamka qaboojiyaha, taasoo saameyn ku yeelanaysa deegaanka gaariga.
Ta labaad, marka qolka waalka uu daboolo xiritaanka saliida ee qiiqa mashiinka, waxyeelada markaa markaa ma ahan mid fudud, dhadhan fiiqan, gaari xawaare sare ku jira xagaaga kulul, maxaa yeelay heerkulka qiiqa kala baxa aad buu u sarreeyaa, wuxuu sababa isku dhejinta gubida saliida cufan, gubida qaybaha kale ee ololi kara, ugu danbeyn waxay u horseedi kartaa dab qeybta matoorka ah